Qunsuliyadda Faransiiska ee Jeddah oo shalay la weeraray | Xaysimo
Home War Qunsuliyadda Faransiiska ee Jeddah oo shalay la weeraray
Ayada oo shalay weerar lagu dilay saddex qof, oo mid ka mid ah la gowracay, laga fuliyey magaalada Nice ee dalka Faransiiska, ayaa sidoo kale weerar kale lala beegsaday qunsuliyadda France ee magaalada Jeddah ee dalka Sacuudiga.
Sida ay ku warrantay wakaaladda wararka ee AFP, nin mindi watay ayaa weeraray qunsuliyadda Faransiiska ee Jeddah, wuxuuna halkaas ku dhaawacay mid ka mid ah waardiyeyaasha.
AFP waxay sheegtay in dhacdadaas oo shalay ahayd ay xaqiijiyeen saraakiisha Sacuudiga.
Dhacdadan waxay imaaneysaa xilli uu weerar kale oo toorrey loo adeegsaday lagu qaaday kaniisad ku taalla magaalada Nice ee dalka Faransiiska, halkaas oo lagu dilay seddax qof, dhowr kalena lagu dhaawacay. Maamulka Faransiiska ayaa weerarkaas ku tilmaamay mid argagixiso.
Booliska Gobolka Makah oo Jeddah ay ka tirsan tahay, waxay sheegeen in qofka la xiray uu u dhashay Sacuudiga, balse ma aysan sheegin dhalashada qofka dhaawacmay, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters.
Dalka Faransiiska wuxuu wajahayaa caro xoog leh oo ka dhalatay sawir-gacmeed laga sameeyay Nabi Maxamed NNKH.